Hlaziya i-Samsung Galaxy S kwi-Firmware 2.3.6 XXJW4 usebenzisa i-Odin | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Samsung
Bonke abasebenzisi be Samsung Galaxy S Abathandi be-Gingerbread banethamsanqa, ngokulandelayo ndiza kubonisa uhlaziyo lwamva nje lolu hlobo lwenkqubo yokusebenza kaGoogle, Iphakheji yexabiso leXXJW4, ezele luphuculo kunye notshintsho oluphawulekayo.
Ukuba banye Uhlaziyo lweFirmware, hayi iFirmware uqobo, siya kuyifumana ukufaka kwisiseko seStock JVU ulwahlulo olungabonakaliyo kwakhona kwiOdin.
Olunye lophuculo olubandakanyiwe kolu hlaziyo zezi zilandelayo:
Isiseko se-Android 2.3.6 XXJW4.
Ukuphuculwa kokujikeleza ngokuzenzekelayo.
I-Kernel ene-384 Mb ye-Ram, eyonyusa kakhulu imemori ye-Ram yesixhobo.
Tshixa isikrini se-Samsung Galaxy SII.
Isicelo esitsha sokuphinda usebenze kunye nokuhlela iifoto.
Inkqubo yokuvula ngokwamkelwa kobuso.
I-TouchWiz 4 kuhlaziyo lwayo lwamva nje.
Ikhamera iphuculwe kakhulu, (Samsung yekhamera yoqobo).
Ukubakho kokuthatha imifanekiso ngelixa usenza umboniso wevidiyo.
Ukulungiselela ukufumana okungcono kwesi siphelo sinamandla.
Njengoko ubona, olu hlaziyo lulayishwe ngophuculo olubalulekileyo, ekufanelekile ukuqaqambisa ifayile ye- Inkumbulo ye-Ram inyuke ukuya kwi-384Mb, Ebonakala kakhulu xa usebenza nezicelo ngasemva.
Olunye uphuculo olubalulekileyo lunokufunyanwa kwifayile ye- Ikhamera yemveli yeSamsung, Kongeze kubo ukuphucuka okubonakalayo kwinqanaba lokusebenza, kwaye kubandakanya izinto ezintsha ezinje ngokukwazi ukuthatha iifoto ngelixa sidubula ividiyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo uhlaziyo olubaluleke ngakumbi, ndingathi, luyakonwabisa abasebenzisi abaninzi be Gingerbread, nangona incinci kwaye incinci, kusekho abo bakhetha Android 2.3.
2 Ukufaka iXXJW4 Value Pack
Njengamaxesha onke xa siza kudanyaza into kwisiphelo sethu, kufuneka siyijonge ibhetri igcwaliswe ngokupheleleyo Ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lomthamo, oku kuya kuthintela ukothuka okungafunekiyo kunye nokungasebenzi kakuhle kwebhetri, ngendlela efanayo, kufuneka sijonge ukuba Ukulungiswa kwe-USB kuvunyelwe, Siza kufumana ukhetho ngokulandela indlela imenyu / useto / usetyenziso / uphuhliso.
Nje ukuba oku kuqinisekiswe, sinokuyicima iSamsug Galaxy S, kuba kufakelo kuya kufuneka siyivule Imowudi yokukhuphela.
Ukufaka iXXJW4 Value Pack
Njengoko besele nditshilo ngaphambili, ayisiyiyo iFirmware uqobo, yi phucula, kwaye ngenxa yoko, kufuneka siqale Ifowuni yeJVU ngokuyimfuneko, ekuqaleni kweposi uya kufumana amakhonkco kwisifundo malunga nendlela yokuyifaka, apho uyakufumana yonke into oyifunayo ukwenza lo msebenzi.
Nje ukuba ihlaziywe kunye no-odín al Ifowuni yeJVU, sinokuqhubeka nemiyalelo kwesi sifundo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile Khuphela uhlaziyo lweXXJW4 kunye nayo CFRoot engqinelanayo, xa sele ukhutshiwe siya kuthi sizivule naphi na kwiPC yethu, ngokukhethekileyo kunye nentuthuzelo enkulu kwifayile ye- desktop yethu yeWindows.
Nje ukuba iifayile ezimbini zingatyiswanga, siya kwenza Idin 1.82.exe kwaye siza kubeka ifayile .ITAR engena ngaphakathi ifolda firmware Kwibhokisi PDA Odin, kufuneka sijonge ukuba ibhokisi ekhohlo ibizwa ngokuba kukwahlula kwakhona, AYIKHANGELWANdiyaphinda, isihlalo sokwahlulahlula-hlula akufuneki sikhethwe.
Siza kujonga ukuba yonke into iyafana nakwisikrini esingentla, kwaye siza kuqhagamshela iselfowuni kwikhompyuter kwi Imowudi yokukhuphelaUkwenza oku, ngaphandle kokuqhagamshela ifowuni kwikhompyuter kunye nokuqala kwisiphelo sendlela sicinyiwe, cofa iqhosha ngexesha elinye ngaphandle kokukhulula. IVolumu ezantsi + ekhaya + Amandla, nje ukuba sifumane isimboli ye-Android njengakulo mfanekiso ungezantsi, sinokuyidibanisa nePC, kwaye nje ukuba uOdin ayamkele, cinezela iqhosha Qala.
Ngale nto siza kuba nakho uhlaziyo lwefayile Ifirmware yeXXJW4 kunye nefowuni yethu iya kusebenza ngokupheleleyo, kodwa ukuba uyafuna Ingcambu kwaye ufake i-ClockworkMod RecoveryKuya kufuneka ufake ngo-Odin kwaye ngaphandle kokumakisha kwakhona ukwahlula ifayile ICFRoot .TAR.
Siza kwenza ngendlela efanayo nangaphambili, ebhokisini PDA, ngaphandle Ukwahlula kwakhona kunye nokudibanisa iselfowuni kwimo umxokozelo, jonga umfanekiso oqhotyoshelweyo:
Nje ukuba siqinisekise ukuba sinayo yonke into njengakulo mfanekiso ungentla, kuya kufuneka sicinezele iqhosha Qala kwaye ulinde umzuzu omncinci oza kuthathwa ngu-Odin ukufaka i-kernel.
Ngale nto uya kuba nayo Ingcambu, kunye ukuchacha kwaye ihlaziyiwe kuhlobo lwe Inkqubo ye-Android 2.3.6 XXJW4 tu Samsung Galaxy S.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyifaka njani iFirmware yeStock JVU kunye neCFRoot yayo
Khuphela - Ifirmware yeXXJW4, ICFRoot XXJW4, Odin 1.82
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, XXJW4 yexabiso lokuhlaziywa kwepakethe efumanekayo yeOdin
Izimvo ezi-99, shiya ezakho
Amathandabuzo ahlukeneyo, ngaba angenziwa ngeOfin Odin? Ngakolunye uhlangothi, ngaba singenza amanyathelo amabini, oko kukuthi, layisha i-boot kunye nokuhlaziywa kwithuba elifanayo (kunye ne-Odin yeselula)?
Khange ndivavanye kunye nesicelo, ndincoma ukuba uyenze ngeOdin yeWindows okanye ngeHeimdall ukuba ungumsebenzisi we-Mac okanye iLinux.
Ngokuphathelele ukuKhanyisa konke ngaxeshanye, andicingi ukuba ndingayenza, kuba inkqubo yeFlashing ngokwahlukeneyo iyakuthatha umzuzu omnye.
Emva kokwenza yonke le nkqubo kwi-yoigo, xa inxibelelana nedatha kuthungelwano lweMovistar, ibeka u "r" wokuzula kwaye iphume kunxibelelwano lwedatha. Ingasombululwa njani le nto. Ngaba ukhona umntu owaziyo?
Enkosi kakhulu, anditshintshanga iRom ixesha elide kuba andifumananga nantoni na endiyithandayo kodwa u-edta undiqinisekisile. Icaciswe kakuhle yonke into. Enkosi.
Umbuzo omnye, ngaba le yiPakethe yeXabiso ekhutshwe ngokusemthethweni yiSamsung?
Ewe kunjalo, ithathwa ngokuthe ngqo kwi-Samfirmware.com
Ukukhutshelwa kweROM akusebenzi, nokuba kubonisa i-170MB, kuma-80 ukukhuphela kuyaphela kwaye ifayile yonakele, naliphi na ikhonkco?
Isebenza ngokugqibeleleyo, tshintsha isikhangeli, oku kunokuba yingxaki yakho, ndiyikhuphele ngeChannel.
Mhlawumbi umbuzo ongenangqondo ... ukuba uhlaziyo njengoko usitsho ... kufuneka ibe malunga ne-Samsung, okanye ingaba malunga neROM yomnye umsebenzisi?
Kuya kufuneka uyifake kwisiseko se-Stock JVU, kwesi sifundo yonke into icaciswe kakuhle.
Buenas tardes. Ndisandula ukuvuselela i-SG S yam njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Kodwa xa sele ndikwazi ukuyiphucula kwi-XXJW4 Firmware kwaye ndizame ukuyivula, iya kwilog engaphumi kuyo. Ayidluli ngaphaya kwescreen apho ithi GALAXY S. Ngaba ndithathe inyathelo elingalunganga? Ndingabuyela umva okanye kukuphela komnxeba?
Faka ifowuni kwakhona kwimowudi yokukhuphela kwaye ufake kuqala i-JVU Firmware ekwahlulwe kwakhona, emva koko iCFRoot yakho engakhange ihlolwe iphinde yahlulwe.
Emva koko uphinde ufake i-XXJW4, kodwa ngaphandle kokumakisha kwakhona, cfRoot nayo ngaphandle kokumakisha kwakhona ukwahlulahlula.
Oko kwenzekile kuwe okanye ngenxa yokuba uyifakile i-JW4 kwi-firmware engeyiyo i-JVU okanye ngenxa yokuba uyifakile ngokumakisha kwakhona.
Isonjululwe, enkosi kakhulu. Ndicinga ukuba impazamo kukuba khange ndiyifake i-JW4 ngokuchanekileyo. Ndididekile ndabeka enye idilesi yekhonkco. Imibulelo emininzi
UFrancisco, ndingafakela olu hlaziyo kumnyele wam weSpica? iyahambelana
Azizizo iimodeli ezifanayo, ke ayifanele
Molo, ndiyenzile le nkqubo amaxesha ama-2 kwaye akukho nto konke konke, i-Samsung yam yi-S GT I-9000, kwaye ndiyathemba ukuba uyandinceda, kuba ndiyayithanda le rom ngaphezulu kwe-ICS, kuba iza nekhamera yoqobo kwaye ayisiyiyo ICS Ikhamera engenalo ukhetho lokuphumla ngelixa urekhoda.
Kungenxa yokuba khange uyifake kwi-JVU okanye ngenxa yokuba ukhangele ibhokisi yokwahlulahlula kwakhona kwinkqubo.
Phinda uphinde ukhanyise kwi-JVU ngokwahlulahlulahlula-hlula, emva koko i-cfroot ye-JVU ngaphandle kokwahlulahlula, kwaye ekugqibeleni i-JW4 ngaphandle kokwahlulahlulahlula.
Uzakusixelela ukuba ungathini, kwaye ungakhathazeki ukuba ixesha elide unako ukufikelela kwimowudi yokukhuphela akukho nto yenzekayo.
Kwenzeka into efanayo kum kwaye ndenze ezi ncwadana zimbini zilandelelana kwakhona kwaye eli nxalenye lokuhlaziya kwi-xxjw4 alinakwenzeka okwangoku k liqala kwakhona phakathi kweluphu kwaye ayisiyiyo kuba ibhokisi yokwahlulahlula yenziwe yasebenza, iluphu ayiphumi Inje, ndingu kedare kude kube sisifundo sokuqala sokuba andinangxaki, enkosi ngayo yonke into oyenzela wonke umntu.
USergio Rodas 1996 sitsho
Ngaba umntu angandixelela ukuba i-ai kufuneka ifomathile iselfowuni ngaphambi kokuyibeka =
Phendula uSergio Rodas 1996
Xa ubeka i-jvu base, kunye ne-odin, xa ujonga iibhokisi ezintathu, yonke into ifomathiwe.
Ngaba uyazi ukuba iyahambelana nemodeli ye-i9000b?
Ndiza kuyifaka kwaye yonke into iqala kakuhle. Kodwa ndiyifakile i-titanium yogcino kwaye xa ibuyisela usetyenziso ndiye kwiscreen sasekhaya kwaye siyandilayisha kwaye siye simnyama siphinde siyilayishe iphinde iphinde ibemnyama kwakhona ngokuqhubekayo kwaye ngaphandle kokuphela ... ndiyifakile iRom kabini kwaye oku akusombululeki 🙁
Faka ingxelo yokugqibela yeTitanium kwiVenkile yokudlala.
Akukho ngxaki ngunxibelelwano lwe-wifi ?? Ndafaka le rom inye kwi-SGS yam ilandela amanye amanyathelo kwelinye iphepha kwaye uqhagamshelo kwi-wifi yehla rhoqo emva kwe-15 s kwaye emva kwethutyana iyaphinda idibane.
ingafakwa ngendlela efanayo yomnyele we-spica?
Ungaze ucinge ngayo
UFFF enkosi !!! Besele ndicinga ukuyenza, ndingayihlaziya njani i-firmware yegalaxy yam?
Ungahlaziya i-firmware kuyo nayiphi na ifowuni yakwa-Samsung, ithebhulethi okanye ithebhu encinci ngokusebenzisa inkqubo YONKE YOMTHETHO, YENZIWE YAYE YENZIWA NGU-SAMSUNG SA obizwa ngokuba yi-Samsung Kies.
Ungayikhuphela kwiwebhusayithi yeSamsung okanye uyikhangele kwiSoftonic, khumbula ukuba le nkqubo isimahla kwaye awubaleki kumngcipheko wokonakalisa isixhobo sakho kuba sisemthethweni esivela kwaSamsung.
Ndishiya ikhonkco, nayiphi na imibuzo, ndibuze Fedeportador@gmail.com
Ndiyathemba ndikuncedisile ukubulisa!
hello ekugqibeleni ihlaziyiwe ukuxabisa ipakethe !!! Yonke into ibigqibelele bendisele ndenzile kumhlohli wakho wangaphambili ukuya ku-2.3.6, kuphela ubuphosakele ukubeka laa nkunzi yegusha ingama-384 ingu-364 kuphela, kodwa iya phambili!
NgePepephone, idibanisa kwimowudi yokuhambahamba, njengoko iyi-MVNO, enobungozi kwabo bahlala kufutshane nomda, ukuba uqhagamshelo lwedatha luxhunyiwe kwinethiwekhi yelinye ilizwe ...
Molo, ingaba le nkqubo iyasebenza kwi-Samsung Galaxy S I9000 eVenezuela nge-Movilnet Operator?
Ewe iyasebenza, ubukhulu becala ukuba awufumani siginali kuya kufuneka utshintshe imodem
Kulungile enkosi mzalwana. Uxolo, umbuzo wokugqibela, ngaba le nkqubo yokutshintsha imodem inzima kakhulu? Ndingenza ntoni?
Ndiyinto entsha kweli lizwe leNkqubo yokuSebenza ye-Android.
Kule tutorial unayo yonke into echazwe kakuhle:
https://www.androidsis.com/samsung-galaxy-s-como-cambiar-de-modem-en-roms-basadas-en-ics/, ekuphela kwento ekuya kufuneka ufumane iimodem ezifanelekileyo kuhlobo lwakho lwe-Android
zihlobo, ndiwalandele onke amanyathelo eposini, kwaye ndimshiyile u-sam. I-galaxy s i9000 idanyaza ngophawu lomnyama, kwaye ayizukuqala okanye nantoni na… .ke ndiyenze!?!?!?!? 1 nceda ncedaeeeeeee
Kungenxa yokuba umakishe ukhetho lokwahlulahlula kwakhona, phinda inkqubo kwasekuqaleni kwaye uqaphele ukulandela onke amanyathelo kwileta
Molo! Ndizamile ukuvuselela i-jw4 nge-odin evela kwi-jvu ecocekileyo, kwaye kuba ikhonkco kwesi sifundo laphukile, ndiyikhuphele i-jw4 ye-XEU ngokuthe ngqo kwi-samsung-update (Samsung-Updates.com-GT-I9000_XEU_2_20120405163220_20w22lfbqs) kwaye indibangele isitena semi, umahluko endiwufumanayo kukuba yiXEU_2 endaweni yeXEU_1 ebonakala kumfanekiso wale khokelo.
Naluphi na uluvo lokuba kutheni isitena senditena sibangela ukuba ndibekho?
Sele isonjululwe, kwenzeka kum ukuba iiKies zaphakama kwaye kungenxa yale nto ndingakhange ndikwazi ukudanyaza ngejw4. Ndiyabulisa, kwaye ndiyabulela kakhulu ngomcimbi!
Ndoda, kwenzeka into efanayo kum. Ndiphantse ndafa xa ndibona iselfowuni injalo, enkosi ngokulungileyo ekugqibeleni ndiyilungisile ndafaka enye i-rom endala kuyo. Ngaba ikho into oyifumeneyo? Ndifuna ngokwenene ukuba nale nguqulo yamva nje.
Ngaba kunyanzelekile ukuba ube yingcambu ukwenza le nkqubo?
Hayi, jonga nje ukuba uyakwazi ukufikelela kwimowudi yokukhuphela
Ndifumana yonke into ngesiNgesi, ungayifaka njani ngeSpanish
Ewe, kuseto ufaka ukhetho olunophawu loonobumba A kwaye kukho ukhetho lokuqala olukhetha ulwimi lwakho
Ukuphelelwa lithemba sitsho
Molo, ndenze ifayile ye-.tar engeyiyo kwaye ngoku ifowuni yam ayivuli, iselfowuni kunye nePC, kwaye phakathi unxantathu omthubi, kwaye ndicinga ukuba andinakuyifaka kwimowudi yokukhuphela, ndingayilungisa njani ? Nceda uncede
Phendula ukuze uphelelwe lithemba
Yicime okwethutyana, emva koko ubuyele kwimowudi yokukhuphela, uqiniseke ukuba iyakuvumela, kwaye uyilayite kwakhona yonke into elungileyo
Kwenzeka into efanayo kum ukuba kufuneka malunga ne-xfa
Sele isonjululwe XD enkosi
cima zonke izicelo kunye namaxwebhu kwi-sd kunye nefowuni?
Molo, ndenze inyathelo lokufundisa ngenyathelo kwaye yonke into ilungile, kodwa inethiwekhi yedatha ayindiboni, i-wifi kuphela kodwa ukuba ndiyisebenzisa idatha ayidibani kwi-3g okanye kwenye, ungandinceda ???
Kuya kufuneka uqwalasele ii-APN
Enkosi mhlobo, imali, ujonga nje idatha ye-APN yomqhubi wakho uyiqwalasele kunxibelelwano olungenazingcingo kwaye kunjalo. IYASEBENZA!!!
Kwenzeka into efanayo kum. Fowunela umsebenzisi wakho kwaye akunike iinkcukacha zenethiwekhi yakho. umxelele ukuba zicinyiwe
Ngaba iphinde yajikeleza kwakhona, ngaba inguKita okhululiweyo?
Ndingathi hayi, kodwa andinakuqinisekisa
Ndifakele i-JW4 kunye neCF-Root ngokulandela amanyathelo kwaye ngoku ndifumanisa ukuba ifowuni isebenza ngokuthe chu. Izicelo zithatha imizuzwana esi-8 ukuvula, isikrini esivulayo ngamanye amaxesha asiphenduli kwaye nesiqalisi siphazamisile. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ingantoni le nto? Ndingenza ntoni ukuze isebenze kakuhle?
Ngaba le nguqulo iyasebenza kwi-samsung GT-i5700?
Nge-12/08/2012 ngo-22: 14, «Disqus» wabhala:
Ndibona iselfowuni kunye nekhompyuter enonxantathu embindini kwaye ihleli apho, ngaba iyi-samsung galaxy wifi 5.0?
Ngaba le firmware yeyemodeli ye-Samsung Galaxy S yeGT-I9000. Dlula kwi-smobile.con kwaye ukhuphele i-firmware kwimodeli yesixhobo sakho
Nge-14/08/2012 ngo-06: 28, «Disqus» wabhala:
Kwenzeka into efanayo kulo msebenzisi, eyam yi-GT I9000, kwaye andinakungena kwiDonloawd okanye kwimowudi yokubuyisela
ndilungile ... ndiyenzile yonke le nkqubo ngokuchanekileyo ... smart yam .. yi-galaxy s19000 njengaleyo yemanyuwali ndenza yonke into ngokuchanekileyo kodwa xa ndiqala kwakhona i-touch screen ayisebenzi, ndingenza ntoni ????
Ndiwalandele onke amanyathelo kunye nefowuni xa uvula uhlala kwindawo eqala ngokutsha eqhubekayo .. 🙁
UJoc Mena sitsho
Molo kwaye ndalandela yonke into kwileta kodwa ndifumana umjikelo wokuqalisa kwakhona ongagqithisi umfanekiso wokulayisha, ndingenza ntoni?
Phendula Joc Mena
Ayisebenzi iseli yam yi-gt-i9000 kwaye bendisandula ukwenza ufakelo lwangaphambili lwesonka sejinja kodwa uhlaziyo lwefirmware JVU nge-Android 2.3.6 lundikhonze okokuqala lasebenza kodwa olu hlaziyo alwenzi nto kwaphela, luqale ngokutsha iseli enye ndaphinda ndaqinisekisa amawakawaka ukwenza into elungileyo kwaye akukho nto kwaphela
Molo, ndiyenzile into oyibekileyo kuncedo lwakho kwaye ndiyifumana emva kokuqalisa kwakhona iselfowuni:
E: Ayiphumelelanga ukunyuka / i-dbdata (Impikiswano engavumelekanga)
E: copy_dbdata_media; ayinakunyuka / i-dbdata yogcino lwakho olungakalungiswa okwangoku. Nceda usebenzise imenyu ye-UI yefomathi kunye nokuqala kwakhona kwezenzo.
Kwaye xa uyiqala kwakhona kwiscreen xa uphawu lweGPS S luphuma, luhlala apho kwaye luqala kwakhona rhoqo kude kube kuphela, oko kukuthi, kuya kwiluphu. Ndingenza ntoni?
Khanyisa i-jvu ngokwahlulahlula uphinde uyibuyise
Nge-04/09/2012 ngo-23: 23, «Disqus» wabhala:
Molo, ndifuna uncedo, nceda uzame ukuhlaziya ifowuni yam kwaye andazi ukuba kwenzeke ntoni, ngoku andivuleli iselfowuni encinci, unxantathu omthubi kunye nekhompyuter, ndicela undincede, enkosi
Yibuyisele kwimowudi yokukhuphela ngokucinezela ivolumu ezantsi, iqhosha eliphakathi kunye naMandla ide icime kwaye iqhubeke nge-Android kunye nonxantathu omthubi, emva koko uphinde uphinde uphume nge-odin kodwa unike ingqalelo ekhethekileyo kwinyathelo lokuqala, phawula kwakhona ukwahlula, kwaye okwesibini akwenzi.
Ahh, ndicinga ukuba sithetha ngemodeli ye-Samsung Galaxy S ye-GT-I9000 kunjalo?
Umbuzo ngaba le pakethi yexabiso ilungele imodeli ye-I9000B okanye i-I9000 kuphela?
Kwaye kumagqabantshintshi athi ebesemngxunyeni ekuqaleni kufuneka ayicime ifowuni kwiPC kwangoko emva kokuba ibenye, xa isikwere esimthubi sijika siluhlaza kwaye sithi PASS
Enkosi ngamaqhinga amaninzi. fullhard01@gmail.com Ndifuna ukukhupha i-macimo kwitafile yam
Ngenisa i-CS ye-MD5 ..
Jonga i-MD5 .. Sukuyikhupha iplagi kwintambo ..
Ukujonga i-MD5 igqityiwe ngempumelelo ..
Shiya i-CS ..
Injini ye-Odin v.3 (ID: 5) ..
Uhlalutyo lwefayile ..
Cwangcisa uqhagamshelo ..
Cwangcisa iPIT ifayile ..
SUKUCIMA OKUJONGILE !!
Umsebenzi wokwahlula kwakhona awuphumelelanga.
Yonke imisonto igqityiwe. (phumelela 0 / usilele 1)
Ndiyabulela uthixo ndifumene isisombululo:
Ukuze uluntu lufumanise ukuba ASIZO ZONKE Iifowuni ZESelfowuni ZIYAFANANA !!!
zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokudanyaza.
Molo mhlobo, ukuba ufuna ukukhuthaza ividiyo yakho akufuneki wenze uluvo olubi kwiposti, kuba yonke into ichazwe ngokuchanekileyo kwaye ukuba ulandela amanyathelo kwileta ngekhe ube nayo nayiphi na into embi.
Ndihlaziye i-gingerbread .xxujw4 my sg, i9000 kwaye ndilahlekile kunxibelelwano lwedatha ... ndingenza ntoni ... »» »» ??? 🙁
Qwalasela ii-APNs kunxibelelwano olungenazingcingo kunye neenethiwekhi
Nge-15/10/2012 ngo-00: 12, «Disqus» wabhala:
zilungisiwe, njengoko ndingazi idatha ye-apn yomsebenzisi wam, ndakhangela ndaza ndazifumana kwiwebhusayithi yakho ... enkosi kakhulu !!!!!
Molo, ndivela eVenezuela kwaye ndilandele isifundo sakho kodwa iseli laxhonywa kum kwaye andazi ukuba ndingayilungisa njani, ungandinceda. Enkosi
enkosi vibes elungileyo kuba isebenze kakuhle kum kwi-samsung galaxy vibrant s
i alluda ngu fa umqondiso we samsung yam yaphuma iyokutshintsha i firmware kwi fa umntu anga alluda me
Funda ukubhala kuqala. Bona ukuba ukubhala uncedo nge «ll» kufuneka ungazi
i-galaxy yam yahlala itshintsha i-firmware ngaphandle kwesandi kwaye ngaphandle komqondiso andiqondi ukuba ndicela undincede
Landela isifundo ukufaka i-JVU firmware onayo apha kwibhlog
UJuampa 22 sitsho
Mholo!!!! Ndilandele yonke into ileta .. kodwa bonke abafowunelwa bam basusiwe… ikhona indlela yokubabuyisa
Phendula uJuampa 22
ingcono kunenguqulo 2.3.6 XXJVU ???
Abahlobo ndiphawule ukuba eposini ikhonkco le-firmware xxjw4 alilunganga, ke xa ndiyifaka emva kokufaka i-jvu ndenza impazamo yokuba iselfowuni yayisemgceni kwasekuqaleni. Ndishiya ikhonkco ukuze ndikhuphele eyiyo http://hotfile.com/dl/178738440/274c404/Samsung-Updates.com-GT-I9000_XEU_2_20120405163220_20w22lfbqs.zip.html
Ndiyathemba ukuba iyakunceda. Ndiyifakile nale kwaye yonke into ihambe kakuhle.
UFernando Gonzalez sitsho
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kwenzeka ntoni ukuba ndiyifaka ngewotshiMod's ROM Manager? Enkosi.
Phendula uFernando González
Ngaba iya kusebenza kwi-GT-I9000T?
eyam yeyam ayisebenzi i-wifi, idatha, umnxeba, emva kokuyifaka. ungandinceda?
NDINCEDWA NGUBANI !!! NDINYANZELELA UKUBA UMNTU ANDINCEDE !!! Ndinayo i-samsung galaxy spica, kwaye ndinengxaki yokuba zonke izicelo azisebenzi, ngokungathi ndifake i-firmware 2.1 ngokungalunganga kwaye khange ndiyenze i-back up !!! Kufuneka ndenze ntoni ukubuyisa iseli yam kakuhle? Nceda undincede
Yiya ku-smobile.com ubhalisa kwaye ujonge i-firmware yoqobo kwimodeli yesiphelo sakho
enkosi uFrancisco !!! Kwaye ke kuya kufuneka ndenze ntoni? inkqubo enye endiyenzileyo xa ndifaka i-2.1 nge-odin?
Ewe kunjalo, kodwa unike ingqalelo ekhethekileyo apho ubeka khona iifayile ezikhutshelweyo, jonga kwi-Intanethi isifundo esisebenzayo ukuze uqiniseke ngento oyenzayo.
Ewe kunjalo, kubonakala ngathi le XXJW4 rom ayisebenzi, ndiyishiya iselfowuni ngokuqala kwakhona okuqhubekayo, faka enye i-XXJW4 esele ndiyikhuphele kwikhompyuter
(GT-I9000_XEU_I9000XXJW4_I9000OXAJW4_I9000XXJW4), andikhumbuli ukuba ivelaphi, kodwa isebenze okokuqala.
UNelson lin sitsho
kodwa, ingcambu iyifanele?
Phendula uNelson Lin
http://hotfile.com/dl/17873844… Ngaba i-Android 2.3 ??????
Ukuba yiGingerbread kwiPakethe yeXabiso yakutshanje ekhutshwe yiSamsung
zihlobo ndinombuzo ndicinga ukuba ndiyicime ngokupheleleyo eyam amandla kodwa ukuba uyandivumela ndingenise ukhuphelo ndingenza njani ukuze ndibuyisele le nkqubo, nceda undincede okanye undidlulisele ukuthanda kweenkqubo ekufuneka ndizisebenzise 🙁 nceda
Zihlobo, isisele sam sele sikrunekile, ayisayi kujika kuyo nantoni na enokwenziwa (ukuyivuselela)
Ndenze ngale nto http://hotfile.com/dl/169623830/6b65cda/Samsung-Updates.com-GT-I9000_FOP_1_20120406144754_4mez61wvff.zip.html Kwaye andazi ukuba kuyakubakho ingxaki, kuba le isithuba indenza ukuba iluphu yethambo iqale xa ndivula, ndingathanda ukwazi okuthile ngayo
Molo ingxaki yam kumnyele wam we-galaxy kukuba ndibeka uguqulelo lwegalaxy mini kwaye ngoku ndifumana ikopi ephindiweyo kwaye kwi-odin ihlala kuqhagamshelo lokuseta kwaye andinakwenza nto ngefowuni ndingaluvuyela uncedo lwakho enkosi kwangaphambili
Intengiso kwibha yesaziso? Yilungise nge-AirPush Detector